musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » British Airways: Hapasisina madzimai nemachinda
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Shanduko mubumbiro reBritish Airways yakaitwa kuti isasarura vafambi vasingawiri pasi pezvikamu zviviri, zvakaita sevana, pamwe ne "kuremekedza tsika itsva dzevanhu."
British Airways inoraira vatyairi vayo kuti vasazonongedzazve vafambi vendege se 'madzimai nevarume'.
Shanduko mubumbiro reBritish Airways yakaitwa senge musoro wekuti 'kubatanidzwa uye kusiyana'.
Hazvisati zvajeka kuti vatakuri veBritish Airways vachakwaziswa sei panzvimbo pechinyakare 'madzimai nevarume'.
British Airways yave yendege ichangoburwa kuti ive nyajambwa wekumuka kurongeka kwezvematongerwo enyika uye yakatsiva kwayaniso yekwavo yezana ramakore neyekusiyana kwevanhurume nevanhukadzi.
The UK mutakuri wemureza akaraira vatyairi vayo kuti vasazotaure nevatakuri se "madzimai nemadzishe", vachichengeta kwaziso-dzevatano kwete.
Shanduko yemutemo yakaiswa sechibvumirano che "kuiswa uye kusiana."
Iko kushandurwa kwemutemo kwakaitwa kudzivirira rusarura kune vafambi vasingawiri pasi pechimwe chezvikamu zviviri, zvakaita sevana, pamwe ne "kuremekedza hutsva hutsika."
The British Airways mutauriri akaonekwa achisimbisa danho rekuti "wakamuka taura," achiona kuzvipira kwekambani ku "kusanganisa nekusiyana."
"Takazvipira kuvimbisa kuti vatengi vedu vese vanonzwa kugamuchirwa pavanenge vachifamba nesu," mutauriri wendege akadaro.
Chiziviso chacho hachina kuenda pasi zvakanaka UK vatauri vanochengetedza. Vamwe vakasvika pakutaurira mutakuri chisarudzo chake chekurasa chirevo, chakaonekwa kwenguva refu senzira yakajairika uye ine ruremekedzo yekero, "kurwisa" hunhu hwenyika yeBritish.
Panguva iyo vafambi vanokwira British Airways ndege haichazonzwizve "madzimai naanababa," hazvina kujeka kuti vafambi vemhepo vachatariswa sei kuenda kumberi, asi ndege iyi "yakurudzira vatyairi vayo kuti vaunze hunhu hwavo muzviziviso zvengarava."
Alan Phipps anoti:
Gunyana 13, 2021 pa 09: 59
Ini ndinonzwisisa chishuwo chekubatanidzwa asi zvakadii nezvetsika uye tsika dzekare dzeBritish? Saka izvozvi tinogona kunzwa "Tigashire Mukati mevanhu Vanofamba nevanhu vanosanganisira maLadies naGentlemen, vana uye vafambi veGBBT vane zvimwe zvikamu zvakasiyana zveruzhinji rwedu !! ”
Chii mutoro wezvisina maturo !! Yakareba uye pamusoro pekukwazisa kwepamusoro naKaputeni. Iri sei WOKE brigade rinosvika sei pachinzvimbo chavanoraira shanduko dzakadai? Chii chaitika kuBritish kwedu?